Puerto Rico: Mitoetra ao amin’ny Anjerimanontolon’i Puerto Rico ny mpitandro filaminana · Global Voices teny Malagasy
Puerto Rico: Mitoetra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Puerto Rico ny mpitandro filaminana
Voadika ny 20 Desambra 2010 17:29 GMT
Voalohany hatramin'ny 1981 izao no nidiran'ny Polisin'ny Puerto Rico ny “campus”-n'ny Anjerimanontolon'i Puerto Rico ary nanambara ny mpiandry trano “tonga hiantoka ny zon'ireo te-handeha hianatra izy ireo.” Izany dia nitranga ora roa monja taorian'ny fahataperan'ny fanapahana fianarana roa andro nataon'ireo mpianatra. Ankoar'izay dia voalaza koa fa tsy voafaritra ny fotoana hijanonan'ny mpitandro filaminana [es].
Ny mpitandro filaminana eo amin'ny iray amin'ireo fidirana ao amin'ny "campus" Río Piedras. Sarin'i Ricardo Alcaraz of Diálogo. Nampiasaina teo ambany fiarovana CC.*
Naneho ny heviny ny profesora sady mpitoraka blaogy Érika Fontánez Torres ao amin'ny Poder, Espacio y Ambiente [es], ùmomba ny fahatongavan'ny mpitandro filaminana ao amin'ny “campus”:
Lavinay an-kitsirano sy toherinay tanteraka, ny fitoeran'ny mpitandro filaminana ao amin'ny Anjerimanontolon'ny Puerto Rico. Inona koa no mbola ataon'ny rafi-pitantanana mba hakàna sy hanapotehana ny Anjerimanontolonay? Ampy izay.
Namoaka fampandrenesana avy amin'ny Kaomitin'ny Zon'ny mpianatra ny gazety amin'ny aterineto 80grados [es], izay miantso ireo mpianatra tsy hiditra ny “campus” raha tsy mivoaka ireo mpitandro filaminana:
Androany izahay mandà tsy hiditra ny “campus” Río Piedras, sy ireo “campus” rehetra hafa ao amin'ny Anjerimanontolon'i Puerto Rico, raha tsy mivoaka ao ny mpitandro filaminan'ny Puerto Rico. Raha tsy izany izahay efa nody tsy nahita ny fahafatesan'ny fombanay tsy tia miady sy ny fahaleovantenan'ny anjerimanontolonay. Tsy tokony hiandry ny fahafatesana Antonia Martínez hafa izahay, maty voatifitr'ireo mpitandro filaminam-panjakàna mba hiarovana ny rafi-panjakàna
Antonia Martínez dia mpianatra 21 taona maty nandritra ny korontana nifanandrinan'ny mpitandro filaminana tamin'ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana tao Río Piedras tamin'ny 1970.
Na eo aza ireo fitakiana sy fanehoan-kevitry ny mpianatra sy mpampianatra, mbola nijanona ao amin'ny “campus” ihany ny mpitandro filaminana. Nitatitra tao amin'ny Twitter ny mpanao gazety Rafael Lenín Pérez [es]:
Mitatitra iero mpianatra mianatra ao Río Piedras fa miparitaka manerana ny làlantsara akaiky efitrano fianarana ireo mpitandro filaminam-panjakàna
Ny hafa eny ivelan'ny”campus” indray naneho ahiahy momba ny fisian'ny mpitandro filaminana. Manazava i Astrid Cruzn mpampiasa Twitter ny fahatsapàny rehefa mandehandeha ao anaty “campus”:
Tiako loatra ny mandehandeha ao amin'ny “campus” miaraka amin'ny mpiambina ny fianarana + mpiambina ahy manokana + manam-pahefàna manara-maso ny fihetsiko rehetra. Mpitandro filaminam-panjakàna, iza aminareo? #LuchaUPR
Mandritra izany, mampirisika ny andaniny roa ny fiombonana mpampianatra mba hilamina, mba hahasoa ny anjerimanontolo. Namoaka ny fanambaran'izy ireo ny gazety amin'ny aterineto 80grados [es]:
Tsy tokony hoterena hifidy ny hanaraka ny mokon-dohan'ny rafi-pitantanana na ny an'ny mpianatra ny Anjerimanontolon'i Puerto Rico.
Mampirisika ny Filoha sy ny Filan-kevi-pitantanana izahay hanàla ny mpitandro filaminana amin'ny Anjerimanontolo faran'izay haingana, ary ho an'ireo mpianatra dia ny hampihato mandritra ny fotoana tsy foafaritra ny fitokonana nofidiany. Mangataka ny Filoha sy ny Filan-kevi-pitanana koa izahay hihaona faran'izay haingana amin'ireo solon-tenan'ny mpianatra, ary hanao fifanakalozan-kevitra eo noho eo mba hampisy fifanarahana mifototra amin'ny fandeferan'ny roa tonta, amin'ny fahafahan'ny roa tonta mifanaraka, mihaino ny ankilany sy mizara andraikitra. Tsy inona fa ny fahaveloman'ny Anjerimanontolontsika ihany no lalaovina amin'izany
Ny mpianatry ny “campus” foibe dia nifidy tanaty fivoriana fa hanomboka fitokonana rahampitso, 14 Desambra, raha tsy foanana ny saram-pianarana manokana $800 — izay hatomboka aloha amin'ny volana Janoary. IOmaly, an'arivony no nanaodiabe [es] nanombokatany amin'ny §Antenimieran'nympanaolalàna hatrany amin'ny tranon'ny Governora any Old San Juan (ny faritra fanjanahana any amin'ny renivohitra), mba ho fanoherana ny tsy maintsyhanoavana izany saram-pianarana izany.
Fanoherana ny saram-pianarana. Sarin'i Melissa Ortega avyao amin'ny blaogy Desde Adentro. Ampiasaina eo ambany fiarovana CC.*
Ny Filohan'ny Anjerimanontolon'i Puerto Rico, José Ramón de la Torres, dia nanambara fihaonana androany miaraka amin'ireo solotenan'ny filan-kevitry ny mpianatra [es]. Mbola ho hita eo raha hangatsiaka kokoa ny loha alohan'ny fitokonana amin'ny 14 Desambra.
*Sarin'ireo mpitandro filaminana, an'i Ricardo Alcaraz ao amin'ny Diálogo ampiasaina eo ambany fiarovana CC License NC-ND 3.0.
*Sarin'ny fanoherana, an'i Melissa Ortega ao amin'ny Desde Adentro ampiasaina eo ambany fiarovana CC License NC-ND 3.0.
*Mba tsidiho ny tatitra manokan'ny Global Voices momba ny fitokonan'ny mpianatra nandritra ny enim-bolana farany teo, raha mila fanampim-baovao.